संचारमन्त्रीलाई साक्षी राखेर राज्यमन्त्रीले चार घण्टा गीत गाउने ! – Nepal Press
संचारमन्त्रीलाई साक्षी राखेर राज्यमन्त्रीले चार घण्टा गीत गाउने !
२०७७ पुष १० गते १६:३८
काठमाडौं | सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङले गिनिज बुक अफ वर्ल्ड रेकर्ड राख्न लगातार चार घण्टा गीत गाउने कार्यक्रमको शुभारम्भ गरेका छन् । शुक्रबार बालाजुस्थित अष्टनारायण फिल्म हलमा आयोजित समारोहमा यसको सुरुआत भयो ।
सहरी विकास राज्यमन्त्री रामवीर मानन्धरले विभिन्न ६२ गीत लगातार गाएर विश्व कीर्तिमान राख्ने भन्दै गीत गाउन थालेका हुन् । कार्यक्रममा मन्त्री गुरुङले राज्यमन्त्रीले लगातार चार घण्टा गीत गाउन आँट गरेर विश्वमा ख्याती कामउने कार्यको प्रशंसा गरे ।
कला र संस्कृतिमा संसारभर चर्चित नेपाललाई राज्यमन्त्री मानन्धरले वर्ल्ड बुकमा नाम लेखाएर थप चर्चामा ल्याउन गर्नुभएको कार्यप्रति खुसी व्यक्त गर्दै मन्त्री गुरुङले शुभकामना व्यक्त गरे । शुक्रवार दिनको १ बजेर ३६ मिनेट जाँदा राज्यमन्त्री मानन्धरले गीत गाउन सुरु गर्नु भएको थियो ।
मन्त्रीस्तरका व्यक्तिले लामो समयसम्म गीत गाउने रेकर्ड सन्सारमै पहिलो हुनसक्ने भएकाले विश्व कीर्तिमान कायम गर्न बेलायतबाट पाँच जना निर्णायकहरु आएको राज्यमन्त्री मानन्धरका स्वकीय सचिव जयप्रकाश श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
प्रकाशित: २०७७ पुष १० गते १६:३८